Su'aalaha La Isweydiiyo - WoopShop ®
Sidee loo raadiyaa alaabta?
Waxaad raadin kartaa badeecada adiga oo soo galaya magaca badeecada ama qodobka muhiimka ah barta raadinta ee xagga sare ee bogga. Isku day in aad gasho sharaxaad guud. Qodobbada muhiimka ah ee aad isticmaashid, waxyaabaha aad ka heli doonto bogga natiijooyinka. Waxaad dooran kartaa qaybta aad raadineyso.
Sidee loo xisaabiyaa Kharashka Gaadiidka?
Waxaan ku jirnaa WoopSop waxay u soo bandhigtaa macaamiisha bilaashka ah ee macaamiishayada dhammaan alaabooyinka, woop woop!
Waa maxay Buyer Ilaalinta?
Badbaadiyaha Qaadku waa xirmo dammaanad ah oo u suurtageliya iibsadayaasha in ay ku kalsoonaadaan boggayaga internetka.
Waxaa lagaa ilaalinayaa marka:
Sheyga aad amartay ma uusan imaan wakhtiga ballanqaadka.
shayga aad heshay lama sida lagu sharxay.
shayga aad heshay oo la xaqiijiyey in ay si dhab ah uu ahaa been abuur ah.
Kursiga Ilmaha Uurka 16.96€ - 38.17€
Anigu waan jeclahay dharka isweydaarsiga xagaaga ee T-Shirt 10.57€ - 12.74€
Midabka Midabka Midabka Midabka Midabka Midabka Midabka Skinny Flat Flat Ragga Isboortiga 55.06€ 24.24€
Suugaanta Hooded Furan Furan Dhuxulada Dabka 24.70€ 21.74€
Cajiibka Cadaadiska ah ee Cudurka Dabeecada ee 'For iPhone Model'
Gaariga Korontada Gawaarida Korontada Kumbiyuutarka Korontada Kuleylka Cabbirka Dabka Guriga
Elastic Turtleneck Knitted Bodycon Midi Dharka
Warqad Dhaleed Lifaaqa Lifaaqa Slim Qallajis
V-Neck Long Sleeve Leopard Maqaarka daabacan dharka khafiifka ah ee Haweenka